Warbaahinta Muqdisho Culeys Kusoo Fool leh iyo Cadaadis Dhan Walba ah,Kaligii Talisnimo Cusub Warbixin.
Monday August 18, 2014 - 21:00:34 in Wararka by Super Admin
Dalkan Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa in uu yahay wadanka ugu hormarsan dhanka saxaafadda qaaradda Afrika marka laga reebo dalka Kenya oo saxaafad xooggan leh.
Kulan hore oo dhaxmaray saxaafadda Muqdisho iyo Ciilmooge
Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxaa kajira idaacado iyo Telefeshinno soo gudbiya dhacdooyinka dalka ka taagan waloow warbaahinadaasi dhammaantood aysan xaqiiqda soo gudbin balse waxaa ladhihi karaa waa warbaahin kaalinteeda gudata.
Markii ugu horraysay dowladda Federaalka ayaa isku dayaysa in ay afka qabato saxaafadda Madaxa banaan ee ka howlgasha magaalada Muqdisho.
Ilo wareedy lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in wasaaradda ammaanka DF-ka ay diyaarisay qorshayaal lagu caburinayo saxafiyiinta wararka kasoo tebiya magaalada Muqdisho.
Khaliif Ereg oo kaashanaya saraakiisha wasaaradda warfaafinta ayaa dajiyay qorshe gacan bir ah ku qabanaya qalabka warbaahinta sida Telefeshinada,Idaacadaha iyo Website-yada qaarkood.
Mid kamida wariyaasha ka howlgala Muqdisho ayaa SomaliMeMo u sheegay in dhowr mar uu baaqday kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda ammaanka oo laysugu yeeray dhammaan warbaahinta madaxa banaan ee gobolka Banaadir ka howlgasha.
Madaxda warbaahinta Muqdisho ayaa ka hor kulanka loogu yeeray yeeshay kulamo hoose oo ay uga tashadeen mowqifka ay ka qaadan doonaan qodobada adag ee Khaliif Ereg maaganyahay.
Ugu yaraan hal idaacad oo Kulmiye lagu magacaabo ayaa lasaadaalinayaa in ay qaadan doonto awaamirta caburiska ah ee dhanka wasaaradda ammaanka kasoo socda waxaana idaacaddan lagu xantaa in ay 95% wararkeedu ujanjeeraan xukuumadda Xasan Gurguurte waana idaacadda ugu kalsoonida xun warbaahinta dhax-dhaxaadnimada sheegata.
SomaliMeMo ayaa si hordhac ah u heshay qaar katirsan ajandayaasha lagu gorfayn doono kulanka dhici doona ugu dambayna ay wasaaradda ammaanka saxaafadda amar kusiin doonto in aan labaahin Karin 1- wararka ku saabsan xarakada shabaabul Mujaahidiin marka laga reebo in labaahin karo haddii ciidamada AMISOM ay qabsadaan magaalo XSHM ay horay umaamulaysay 2-in warbaahintu aysan faafin Karin shirar jaraa’id oo ka dhan ah DF-ka sida siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo beelaha diidan takrifalka shisheeyaha.
Laba idaacadood oo madax banaan ayaa maalmo ka hor albaabada loo laabay kadib markii idaacaddaasi ay wareysatay Axmed Daaci oo ku dhiiraday in uu iska caabiyo ciidamada AMISOM iyo maleeshiyaadka Khaliif Ereg waxaana lafilayaa in maxkamad lasoo taago agaasimayaasha shabelle iyo SKY News.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Xasan Sheekh uu talooyin ka helay hoggaamiyaasha Digteetarada Jabuuti,Itoobiya iyo Uganda oo aysan kajirin wax warbaahin madax banaan ah balse Soomaaliya ayaa wadamadaasi ka duwan sababtoo ah waa dad war ku noolayaal ah oo dhacdooyinka iyo siyaasadaha isdiidan si fudud ku heli kara.
Dunida casriga warbaahinta lama caburin karo sababtoo ah waxaa soo baxday warbaahin bulshadu kuwada xariirto waxaana sahlan in dadku daalacdaan websiteyada islaamiga ah iyo baraha bulshada mana jiri doonto war qarsooma oo Muqdisho ku saabsan.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in wariyaal caan ka ah soomaaliya ay ka biya diideen qodobadan waxaana lafilayaa in ismariwaa uu ka dhax dilaaco bahda saxaafadda Muqdisho iyo Khaliif Ereg.
Dagaallo iyo qaraxyo ciidamada AMISOM lagula beegsaday duleedyada Muqdisho iyo Marka.
Ururka Ikhwaanul Muslimiin oo yeeshay Hoggaan Cusub.
Sheekh Soomaaliyeed Oo Ka Hadlay Dhacdooyinka Naxinta Leh Ee Ka Jira Muqdisho.